Xildhibaan Ka Tirsan Baarlamaanka Somalia oo ka digay Amar kasoo baxay Sacuudiga | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Xildhibaan Ka Tirsan Baarlamaanka Somalia oo ka digay Amar kasoo baxay...
Xildhibaan Ka Tirsan Baarlamaanka Somalia oo ka digay Amar kasoo baxay Sacuudiga
Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka mid ah Xildhibaanada Golaha Shacabka oo la hadlay Warbaahinta ayaa ka digay Amar kasoo baxay dowladda Sacuudiga in uu sameyn ku yeesho dadka Soomaaliyeed ee kunool dalkaasi.
Dalxa ayaa sheegay in dowladda Sacuudiga ay soo saartay Amar ah in lacag laga rabo saddexdii biloodba dadka Ajnabiga ee dalkaasi kunool.
Waxaa uu sheegay in dadkaasi aysan bixinkarin lacagtaasi ,islamarkaana qoysas badan oo danta yar ah ay kunool yihiin dalka Sacuudiga.
Dalxa ayaa sidoo kale tilmaamay in Soomaaliya ay ka mid tahay dalalka Jaamacadda Carabta , islamarkaana Sacuudiga laga rabo in xukunkaasi uu ku rido dadka ka yimid dalalka aan ka mid aheyn Jaamacadda Carabta.
Mudane Cumar Dalxa ayaa ka mid ah Xildhibaanada Baarlamaanka Jaamacadda Carabta , waxaana uu sheegay in ay ka shaqeyn doonaan dadka Soomaaliyeed ee kunool dalalka Jaamacadda Carabta Xallinta dhibaatooyinka soo wajaha.
Dowladda Sacuudiga ayaa dhawaan ku dhawaaqday in lacag laga rabo dadka Ajnabiga ee kunool dalkeeda.